Ny "Hereditary" dia tonga lafatra, mampidi-doza, mampihetsi-po
Home Vaovao Mahafaly Fialam-boly [Fijerena SXSW] Fandefasana sary an-tsary tonga lafatra, mampidi-doza, mitarika fanahiana ny «Hiteritary»
[Fijerena SXSW] Fandefasana sary an-tsary tonga lafatra, mampidi-doza, mitarika fanahiana ny «Hiteritary»
by Trey Hilburn III March 15, 2018 995 hevitra
Avy amin'ny faharoa manaranaka manomboka, fantatrao fa manana zavatra hafa ianao. Ny zoom miadana mankany amin'ny trano fanaovana saribakoly toa fiainana iray izay mivadika ho trano tena izy dia mahafantatra tsara ny tenany, voasintona any amin'ny zavatra tsy azo antoka ianao. Riptide hita maso izay hitarika anao hivoaka ho any amin'ny ranomasina maizina sy tsy mangoraka.
Ity tantara ity dia manaraka ny fianakavian'i Graham, izay miatrika ny fahaverezan'ny ray aman-drenin'ny fianakaviana vao tsy ela akory izay. Fotoana fohy taorian'ny fandevenana dia nanomboka nahita ny fianakaviana fa ny fakan'ny razambeny dia mety hisy fatorana mampatahotra.
manaranaka dia fanafihana stratejika ho an'ny mpihaino azy. Ny tranon'ny fianakavian'i Graham dia trano fanaovana saribakoly avo lenta, mahatsiaro ho tsy misy kilasy miaraka amin'ny fanaka sasany misy haavo avoavo na refy mamorona sombin-tany kely tsy dia mahazo aina hafa izay efa miasa amin'ny fahitana anao. Ny famolavolana feo dia famonoana binaural tsy tapaka izay lalaovina saika mandritra ny hetsika voalohany amin'ny sarimihetsika. Ireo singa roa ireo dia efa manangona anao amin'ny fomba tsy fantatra, alohan'ny nampidirana ireo singa mampatahotra.
Ny tena mahavoa ny saiko dia ity no talen'ny Ari Aster. Ity tovolahy ity dia tsy maintsy niaina fiainana maro tamin'ny naha-talen'ny antony teo aloha azy, tapa-kevitra izy amin'ny fanaovana sary. manaranaka dia fanahiana mampidi-doza mitaona ny fanaovana sarimihetsika, namorona làlana vaovao, manta ary mampatahotra ho an'ny karazana horohoro i Aster.
Ny horonantsary dia mety misy amin'ny maha-tantaram-pianakaviana azy ary mety handraoka. Aster dia mitandrina mba hampandeha ireo singa amin'ny tantara an-tsehatra, raha mampiditra tsikelikely ny tahotra mandady. Tahaka ny fametrahana sahona ao anaty vilany misy fiakarana miakatra tsikelikely ny maripana, efa masaka amina sary sy hevitra mampivadi-po mahatsikaiky ianao.
Mpankafy horohoro A24 be dia be aho. Sarimihetsika karazana atmosfera toa The Witch dia ny kaopiko manokana. manaranaka maka ny singa an-habakabaka ary manampy azy ireo amin'ny alàlan'ny famoahana ny karazana tian'ny mpihaino mampihoron-koditra (eny, na dia ny fampitahorana mitsambikina tena mahomby aza) mamorona horonantsary izay mahatsapa fa afaka mamaky ny elanelan'ny mpankafy mandoro miadana ny habakabaka sy ny mpihaino mampihoron-koditra bebe kokoa. .
Ny sary notapahina tao amin'ilay sarimihetsika dia niraikitra tao an-dohanao. Mbola mieritreritra an'izany aho izao. Betsaka ny tantara an-tsehatra mitantara tena mahira-tsaina amin'ny famolavolana ilay traikefa mba hamelana anao tsy amin'ny sary an-tsaina fotsiny fa tena mety te hody sy hikaroka.
Ny hatsangana dia fahalehibeazana madio. Toni Collette sy ny mpianakaviny tsirairay avy dia mitondra anao amin'ny alàlan'ny lalana efa mahazatra sy mahazatra anao alohan'ny hamelana anao irery very ary tsy misy kompas amin'ny fitantaran'ny fianakaviana maizina. Ny alahelon'i Collette sy ny toetrany lehibe dia manambara ny asa voajanahary sy mafy orina.
"manaranaka dia ahiahy mampidi-doza mitaona ny fanaovana sarimihetsika, Aster dia namorona làlana vaovao, manta ary mampatahotra ho an'ny karazana horohoro. ”
manaranaka dia zava-bita mahatsiravina amin'ny lafiny rehetra. Izy io dia manao zavatra tsy mitongilana miaraka amin'ny fizotry ny alahelo sy ny fihetsiky ny mpianakavy ary avy eo mamadika azy ireo amin'ny fomba saika maloto. Sarimihetsika feno hafanam-po izy io, ny tanjony dia ny hampiala anao ary niasa tamiko tanteraka izy io. Avy amin'ny toerana ipetrahako dia tsy misy fomba tsy hitrangan'ity horonantsary ity amin'ny lisitra 5 voalohany amin'ny faran'ny taona. Mampidi-doza ity sarimihetsika ity ary tsy andriko ny hiainako azy indray.